Manaingo maso ho « œil charbonneux »
Bobongolo, mando lava… toy izao ny fanalana azy !
Ratsy ho an’ny fahasalamana ny bobongolo. Miteraka karazana aretina sy fikorontanana amin’ny vatana izany. Mba hisorohana izany dia tsara raha sokafana hatrany ny varavarana sy varavarankely mba hidiran’ny rivotra sy ny masoandro. Raha efa misy bobongolo kosa anefa ao an-tranonao dia ireto misy fomba hanadiovana azy.
Ambonin’akanjo maivana, nozairina tao an-trano
Mafana ny andro izao. Andeha hanjaitra ambonin’akanjo maivamaivana mba tsy handaniam-bola be amin’ny fividianana izany.
Volomaso misoritra tsara, “crayon” ihany no hanaovana azy…
Manome endrika ny maso ny volomaso ambony rehefa tsara soritra. Tsotra kely ny fanamboarana izany soritra izany, na dia tsy manana ireo fitaovana rehetra aza fa “crayon cil” fotsiny no ampiasaina.
Mamadika T-shirt ho akanjo tohitena
Raha mila akanjo tohitena, nefa tsy nahatondra izany any am-panaovana vakansy any, dia aza mikoropaka ! Ny T-shirt anananao dia azo avadika ho akanjo tohitena fohy, tsy misy tanany, na irony antsoina hoe : “robe bustier” irony.
Tennis « personnalisé », ianao irery no manana azy
Lamaody be ny tennis kely tsotra amin’izao. Ankoatra ny maha-maivamaivana azy mantsy dia mety anaovana amin’ny akanjo rehetra izy itony, na zipo, na akanjo tohitena na pataloha ary mety amin’ny karazan-taona rehetra ihany koa.
Vao maraina dia miiratra ny endrika…izao atao
Noho ny havizanana, ny rarin-tsaina sns dia mety ho maloka ny hodi-tava, amin’ny maraina vao mifoha iny. Izany indrindra no tsara hanatanterahana an’ireto torohevitra 5 ireto, fa hanazavana ny endrika izany.
Efa adinonao tanteraka ve ny olon-tianao taloha ?
Efa nisaraka ianareo, efa vita hatreo ny fiarahana, nefa indraindray, toa mbola mahatsiaro azy ihany ianao, mbola malahelo azy mihitsy aza, na koa tsy fantatrao mazava ny fihetseham-ponao momba an’ilay olon-tianao taloha. Ataovy ity fitsapana ity dia ho fantatrao mazava izany. Isao izay betsaka indrindra azonao, na A, na B, na D, na E. Omena anao amin’ny alakamisy izao ny valiny.
Tena lamaody ny « smoky eyes » amin’izao fotoana, izany hoe : manjamaso miloko matroka. Tafiditra ao anatin’izany ny loko mainty, volon-davenona, maitso matroka, sns.
Mahafinaritra ny mahita ieo olo-malaza manao izany, kanefa somary mampatahoatra an’ireo mbola tsy zatra ny manatanteraka azy. Ity misy fomba tsotra ahafahanao manao ny “oeil charbonneux”, na « smoky eyes ».
· Asio manjamaso mazava, manana loko mifanakaiky indrindra amin’ny hoditra ny hodimaso mihetsika : ny mavokely sy ny “nude” izao dia azo ampiasaina.
· Raiso ilay borosy manify rehefa vita izay. Hosory “eyeliner” ny sisin’ny volomaso ambony. Ataovy manomboka avy any anatiny ny fanoritana azy ka tsipika manify no anombohana azy ary atao mihamatevina arakaraky ny anatonana ny sisi-maso. Ataovy miendrika faingo kely ny famaranana ny soritra.
· Asio “eyeliner” ihany koa ny volomaso ambany. Ataovy avy aty ivelany ny fanosorana azy, ka ajanona eo amin’ny antsasaky ny maso ihany.
· Rehefa vita izay rehetra izay dia hosory manjamaso miloko volon-davenona matroka indray ny hodimaso mihetsika, saingy ny antsasany ihany, avy ety ivelany, no asiana an’izany
· Farano amin’ny fanosorana “mascara” dia vita ny “oeil charbonneux” !